Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Kọmitii njem nlegharị anya nke Africa na -eme anwansi ya na Tanzania
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi oche ndị njem nlegharị anya Africa na Tanzania
Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka Cuthbert Ncube rutere Tanzania na ngwụsị izu maka njem nlegharị anya na -arụ ọrụ ma soro ndị isi ọrụ na Ministry of Tourism na Tanzania Tourist Board (TTB) kwalite iji kwalite mmekọrịta na mmepe njem na Tanzania na Africa.
Ministri ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania kwupụtara mkpebi ya imekọrịta na Kọmitii Njem Nleta Africa (ATB).
Isi ihe maka njem nlegharị anya bụ itinye ego. Mkparịta ụka maka ụlọ nkwari akụ Kempinski Brand kpakpando 5 dị na ogige ntụrụndụ anụ ọhịa nke ugwu Tanzania nke Serengeti, Tarangire, Lake Manyara, na Ngorongoro bụ nke a ga-ekwu.
Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Africa Cuthbert Ncube zutere Onye a na -akwanyere ùgwù bụ Minista na -ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya, Dr. Damas Ndumbaro, n'ọfịs ya na Dar es Salaam.
Minista na -ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya na Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, nwere mkparịta ụka ya na onye isi oche ATB Maazị Cuthbert Ncube na -ezube imekọ ihe ọnụ n'ịre ahịa njem nlegharị anya Tanzania na ohere itinye ego njem nlegharị anya gafee ụwa.
“Njem nlegharị anya aghọọla ngalaba akụ na ụba na -eduga ọrụ, mgbanwe mba ofesi, na nnabata ụwa niile, na -enwe ọ enjoyụ dị otú ahụ na njem nlegharị anya anụ ọhịa na -elekwasị anya na njem nlegharị anya n'ụsọ osimiri na ọdịbendị nke kwalitere njem nlegharị anya Tanzania na -adọta ngalaba ahịa dị iche iche maka ndị njem na ndị ọbịa. yana maka ohere itinye ego, ”ka Minista ahụ kwuru.
Ọ bụ site na azụ nke a ka Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na -arụkọ ọrụ nke ọma Ministry of Tourism ka nyere aka n'ịkwọ ụgbọ ala, ịkwado na ịhazigharị ọdịnihu njem. A na -ahụ Tanzania dị ka ọla nke Afrịka nke na -enye ọtụtụ ndị na -etinye ego na ndị njem.
“Nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke na -arụ ọrụ dị mkpa na usoro mmepe akụ na ụba na Tanzania adọtala okporo ụzọ ezi uche dị na ya site na mba ụwa na mba ahụ. Ndị Mmasị mkpali sitere n'aka Onye isi ala ya Samia Suluhu Hassan, onye bụrụla onye nnọchi anya njem nlegharị anya nke mba mbụ n'ịkwalite Tanzania dị ka ebe kacha aga njem na Afrịka, [na -etinyekwa mpaghara ahụ ka ọ bụrụ ogidi isi maka uto na -adigide na mba ahụ, "Dr. Damas kwuru.
Onye ozi ahụ kwusiri ike mkpa ọ dị ijikọ aka ọnụ zuru ụwa ọnụ iji mezuo ebumnuche nke ndị ọkwọ ụgbọ ala bụ isi nke ga -eduga ma nnwere onwe na nnwere onwe akụ na ụba nke ọtụtụ ndị Afrịka.
N'akụkụ mkparịta ụka ndị bụ isi, ATB na ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Tanzania ga -arụkọ ọrụ ma na -arụkọ ọrụ ọnụ na mba ahụ iji nweta uto 30% aturu anya na GDP site na uto njem na -adigide.
Ncube gbakwụnyere, "Ọ bụrụ na enwere oge Africa ga -ebili, too, ma nye iwu ka akụ na ụba ya na -eto, ọ nweghị oge ka mma ugbu a na -emesi ike imekọ ihe ọnụ na njem na mpaghara ndị ọzọ nwere ike inye mmesi obi ike maka ịdịgide adịgide. ma chekwaa uto akụ na ụba nke ga -abara kọntinent ahụ uru. "
Ya na ndị njem nlegharị anya nke Afrịka, ndị nnọchi anya Europe sitere na Bulgaria gara National Tourism Colege nke Tanzania, nke nyere aka n'ịzụ ndị nnọchi anya isi n'ihu ndị na-arụ ọrụ ugbu a n'ịkwalite uto akụ na ụba ndị njem.
Ndị nnọchi anya mba ofesi zutere na Tanzania na Mịnịsta na -ahụ maka njem nlegharị anya (etiti), gụnyere onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Africa (n'aka nri).
Dị ka Cuthbert Ncube si kwuo, nke a bụ ọrụ nke ndị njem nlegharị anya nke Africa. Cuthbert na -edu ATB kemgbe afọ 2019. Ọ dabere na alaeze Eswatini ya na ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi na Hawaii, USA.
O mechiri site n'ikwu, "Otu ụmụnna nke steeti Afrịka bụ ihe nketa kacha mma anyị nwere ike ibi na ya. Akụkụ njem nlegharị anya bụ otu n'ime isi akụ na ụba, si otú a na -abawanye onyinye njem na mpaghara mpaghara mpaghara. Oge erugo ijikọ ike anyị na ijikọ mkpebi anyị. Ọ bụ oge ịkwaga dịka otu maka nsonaazụ na -adịghị ada ada.
“Ugbu a bụ oge ikwu okwu n'otu olu.
“Ka mgbidi nkewa wee daa ka àkwà mmiri kewaa nkewa.
"Anyị bụ otu, anyị bụkwa ndị Afrịka."
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na ATB na africantourismboard.com.